Filipina: Mpianatra Iray Namono Tena Rehefa Noterena Hanapaka Ny Fianarany Noho Ny Saram-pianarana Tsy Voaloa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Marsa 2013 23:53 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Svenska, Português, English
Namono tena tamin'ny Zoma maraina lasa teo ny tovovavy iray 16 taona, taona voalohany amin'ny sampana fianarana ny Siansan'ny Fitondrantena tao amin'ny Anjerimanontolon'i Filippina, ao Manila. Hita faty tao an-tranon'ny fianakaviany tao Tondo ao Manila izy, roa andro taorian'ny nanakanan'ny mpitantana ny sekoly azy tsy hanatrika ny fampianarana intsony noho ny reska saram-pianarana tsy voaloa.
Izy no zokiny indrindra amin'ireo mpiray tampo aminy. Mpamily fiarakaretsaka mandritra ny ampaham-potoanany no asan-drainy raha mpikarakara tokantrano kosa ny reniny. Napetraky ny mpitantana ny anjerinanontolo ho eo ambanin'ny antsona hoe Bracket D ao amin'ny Socialized Tuition and Financial Assistance Program (STFAP) izy, (fandaharan'asa sosialy manampy ara-bola amin'ny resaka fampianarana)
UP Manila implements a Nametraka ny polikan'ny “tsy fanekena saram-pianarana tara” ny UP Manila ka ao anatin'izany dia voatery misinda ny anjerimanontolo ireo mpianatra tsy mahaloa ara-potoana ny saram-pianarany.
Zo ny mianatra | Sary avy amin'ny Pixel Offensive
Alahelo sy fitserana no nameno ireo tambajotra sosialy rehetra sy ireo bilaogy tantanan'olona manokana tamin'izao fahafatesany aloha loatra izao. Maro ihany koa ireo naneho hatezerana amin'ny halafon'ny saram-pianarana sy ny fidirana an-tsekoly ary ny rafitra fanabeazana ao Filipina lasa fitadiavam-bola tafahoatra ka nitarika ilay mpianatra hamono tena. Ireto ny sasany tamin'ireo fanehoankevitra tao amin'ny Twitter:
@adrianayalin: Vaovao mampalahelo, mpampalahelo, mampalahelo mikasika ny mpianatra iray tao amin'ny UP Manila voalaza fa namono tena noho ny saram-pianarana tsy voaloa.
@teddycasino: Ireo mpitàna birao manana fo vato ao amin'ny UP Manila ireo no tokony hametra-pialàna anaty fanamelohan-tena & henatra.
@jcmaningat: Felaka tehamaina mivaivay eny amin'ny tavan'ny @PresidentNoy ny famonoan-tena nataon'ilay mpianatry ny UP Manila, ny filoha izay milaza fa mora kokoa ny fiainana eo ambanin'ny fitondràny #justice #fb
Ny mombamomba azy ao amin'ny Facebook-n'i Cleve Kevin Robert Arguelles, mpitantana ny mpianatra eny amin'ny UP ahitàna mpianatra 50.000 avy amin'ny Seha-pitantanana UP rehetra mitambatra:
Tsy famonoantena ny trangan'i Kristel Tejada. Tsy nisy safidy – na ianao mandoa na ianao mitsahatra tsy manohy ny nofinofinao. Ny rafitra no namono azy – rafitra iray izay mandà ny hankato ny maha-zo n y fanabeazana, sy hoe refesina amin'ny alàlan'ny fahafahanao mandoa vola ny fiainanao. Andro iray sady mampalahelo no mahatezitra ho antsika Iskolars ng Bayan (manampahaizan'ny vahoaka). 🙁
Ao anatin'ny bilaoginy, Alyanna Morales nahazo diplaoma avy tao amin'ny UP Manila dia manantena fa ilay tranga dia hitarika aminà fanovàna ifotony ny politikan'ny saram-pianarana eny amin'ny anjerimanontolo:
Inoako fa isika no rafi-panabeazana iray izay midoka tena ho misy voninahitra sy tonga lafatra. Nefa raha toa isika mandà ny zony noho ny resa-bola, tsy ratsy lavitra noho ny rafitra izay lazaintsika fa hiadiana sy lavina ve isika? Aiza ny voninahita sy ny tonga lafatra ao anatin'izany, ry UP malalako?
Fandrehetana labozy tao amin'ny UP Manila | Sary nalain'i Carl Marc Ramota
Mampitaha ilay famononantena vao haingana nataonà mpianatry ny UP Manila io tamin'ny fahafatesan'ny zazavavy iray 12 taona tao an-tanànan'i Davao, dimi taona lasa izay i Jefrey Tupas:
Ireo izay avy amin'ny sarambabem-bahoaka, ireo izay miaina ambanin'ny fahantrana, no mizaka mivantana ny politikan'ny governemanta momba ny fanaovana ny fampianarana ho toy ny varotra. Ny governemanta mavo – ny governemantan'i Aquino – dia manohy hatrany io raikipohy napetraky ny governemanta teo aloha ho amintsika io.
Mamaly i Dean Lozarie ho an'ireo izay mitady ny hamadika ilay olana tsy ho ao anaty resa-politika amin'ny fanindriana hoe resaka manokana fa tsy misy idiran'ny politika ilay fahafatesana.
Nefa izany no izy, raha ny tiantsika tenenina ara-politika dia ny hoe manoritsoritra ny toe-zavatra amin'ny sehatra midadasika sy mitaratra ny fitantaràna ny tantaran'ny fiaraha-monina iray manontolo izany. Afaka miady hevitra momba ireo zava-misy isika, ary afaka miady hevitra momba ny zavatra tena nandalo tao an-tsainy nandritra ny fotoana farany nahavelomany. Nefa amin'izany dia afaka manaiky soa aman-tsara isika fa: herintaona monja nandritra ny fijanonany tao amin'ny anjerimanontolo voalohan'ny firenena, nanakana azy hanohy ny fianarany ny politika napetraky ny anjerimanontolo sy ny governemanta efa hatry ny ela. Nolavina ny fangatahany sy ny an'ny fianakaviany miverimberina sy ara-drariny ho famerenana azy any aminà bracket ambany kokoa eo amin'ny fandaharana fanohanana ara-bolan'ny Anjerimanontolo ao Filipina sy ny hijerena manokana ny toerana misy azy. Niantraika lalina teo amin'ny ara-pihetseham-pony izany. Ireo endriky ny fiaraha-monina ireo, ny an'ny tantaran'ny firenentsika amin'izao fotoana, dia mivandravandra ao anatin'ny mombamomba ilay mpianatra taona voalohan'ny Anjerimanontolon'i Filipina avy any Tondo izay te-handia fianarana fotsiny ihany.
Tsy misy ny Vola, Tsy misy Fifindrana Kilasy | Sary avy ao amin'ny Pixel Offensive
Manazava ny antony mahatonga ny STFAP-n'ny anjerimanontolo ho fàfana mamoaka setroka entina hanakonana ny fiakaran'ny saram-pianarana sy mamorona tontolo mampidi-doza ho an'ny famonoan-tena, ny solotenan'ny mpianatry taloha avy amin'ny Anjerimanotolo Krissy Conti.
Ny fitambaran'reo saram-pianaran'ireo nisoratra anarana rehetra voaray farany, mipetraka ao anatin'ny fitantanan'ny governemanta. Tsy nisy na iray aza sahy nandà fa nitombo ny vola avy amin'ny saram-pianaran'ireo mpianatra nandritra ireo taona mifanesy. Eny tokoa, lasa loharano azo antoka ho fidiran'ny tonga dia vola (liquide) izany ary avy amin'ireo saram-pianarana ireo no voalamina hanaovana saika ny antsasaky ny fanamboarana rehetra
Mitsikera i Priscilla Pamintuan fa ohatra mivaingana manaporofo ny rafitra tsy rarin'ny fampianarana mibahana eo amin'ny firenena ankehitriny io famonoan-tena io.
Na inona na inona fomba hanasan'ny Kaomision'ny Fampianarana Ambony tànana eo anoloan'ny vahoaka – satria manana fizakan-tena hametraka ny politikany manokana manodidina ny saram-pampianarana ny anjerimanontolom-panjakana tsirairay – tsy afaka mandà ny andraikiny manoloana ny zavatra manjo ny mpianany izy. Tsy ny CHED sy ny biraon'i Benigno Aquino III va no nanararaotra efa hatry ny ela ny fanapahana isan-taona ny tetibola ho an'ireo mpianatry ny fanjakana sy ny anjerimanontolo mba hanaovana azy ireny ho “mizaka tena”?
Anatinà naoty Facebook, manoratra antso hihetsehana ho fanomezan-kaja hahatsiarovana ilay mpianatra maty i Lisa Ito.
Ny sasany niangavy: tsy vahaolana ny famonoan-tena, aza mamoy fo, misy ny fanantenana. Manaiky aho. Ny vahaolana dia ny fiadiana ho an'ny zon'ny olona iray, ary mijery ny ady hatramin'ny farany. Tsy hiteny mihitsy aho hoe very hasina izy, satria—na inona na inona antony nahatonga azy nanao ny zava-bitany—ny fanaovany sorona ny tenany sy ny fahabangana eo amin'ny fianakaviany dia nahatonga antsika hiatrika amin'izay ilay marina mankarary: fa tsy misy hevitra afa-tsy ny fihetsehana manoloana ny trangan-javatra misy amin'izao fotoana.
Ny laharana voalohany amin'ny anton'ny famonoan-tena ao amin'ny firenena dia ny rarin-tsaina tsy voatsabo. Azo tsaboina tsara ny rarin-tsaina ary azo sorohana ny famonoan-tenba. Afaka mahazo fanampiana avy amin'ireo laharan'antso fizaràna tsiambaratelo ho an'ny resaka famonoan-tena sy ho an'ireny olona misedra olana ara-pihetsehampo ireny. Tsidiho ny Befrienders.org hahitànao fanampiana ety anaty aterineto isorohana ny famonoan-tena any amin'ny firenanao.